Home Wararka (IDI). Qaramada Midoobay oo ka walaacsan Sharciga Hanti-dhowrka Guud
(IDI). Qaramada Midoobay oo ka walaacsan Sharciga Hanti-dhowrka Guud
Urur hanti dhowrayaasha adduunka ayaa ka digay Sharciga Hanti-dhowrka Qaranka ee hadda horyaal Aqalka Sare inuu baabi’i doono awoodda iyo madax-bannaanida Hanti-dhowrka guud haddii loo gudbiyo sida ay tahay.
Hay’adda INTOSAI Development Initiative (IDI) ayaa warbixin ay soo saartay Jimcihii ku sheegtay halka sharciguna yahay ‘mid taariikhi ah’ ee kor u qaadista dowlad wanaagga Soomaaliya, qeybo ka mid ah sharciga ayaa hoos u dhigaya awoodda xafiisku u leeyahay inuu ka madax banaanaado xafiiska Ra’isul Wasaaraha iyo dhammaan hay’adaha fulinta.
“Waxaa naluga dhiirrigeliyay inaan aragno sharciga cusub ee isla xisaabtanka ee lagu soo ansixiyay aqalka hoose haatanna horyaalla aqalka sare ee baarlamaanka, laakiin waxaan ka walaacsanahay in sharcigan uu halis ku yahay madax-bannaanida xafiiska Hanti Dhowrka Guud. Agaasimaha guud ee IDI Einar Gørrissen ayaa yiri.
“Nidaamka magacaabista iyo xil ka qaadista Hanti-dhowrka Guud wuxuu u baahan yahay inuu magacaabo Madaxweynaha, kaddib soo jeedinta golaha wasiirada si looga ilaaliyo loogana hortago faragelinta xafiisyada fulinta oo uu ugu horreeyay xafiiska Ra’isul Wasaarahah” ayaa lagu sheegay warbixinta.
Sida sharcigu qabo, Hanti-dhowrka Guud waxaa magacaabaya Madaxweynaha kadib soo-jeedinta Golaha Wasiirrada ee ka maqan doorkii kormeerka ee baarlamaanka si loo kala qaado murashaxiinta xafiiska.
IDI ayaa sheegtay in qofka haya xafiiska Hanti-dhowrka guud ee Qaranka inuu shaqadiisa ka madax banaanaado fulinta. Balse sida loo qoray sharcigan waxa uu sahlaya in fulinta aanay yeelan hay’ad la xisaabtanta oo ka madax bannaan sida dhacday sanadkii hore ee 2018 kaddib markii RW Kheyre uu diiday warbixintii dabagalka xafiiska Hanti Dhowrka.
Hanti Dhowrka sidoo kale waa in uu noqdaa mid madax bannaan dacwadna ku soo oogi kara hay’adaha iyo shaqsiyaadka lagu helo musuqmaasuq, isla markaana uu dacwad u gudbin karo xeer ilaaliyaha si sharciga loola tiigsado kuwa ku xadgudba qaanuunka.
Sharciga ayaa hadda horyaal Aqalka Sare kadib markii uu meel mariyey Aqalka Hoose bishii Febraayo 2019. IDI waa urur aan dawli ahayn oo leh heer wadatashi gaar ah oo leh Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada (ECOSOC) ee Qaramada Midoobay.